GIS na-adabere n'ọrụ. Ictiongha na eziokwu - Geofumadas
Ndị ọrụ na-adabere na GIS. Fiction megide eziokwu
Septemba, 2017 Geospatial - GIS, My egeomates
Mgbe ị gụsịrị otu edemede nke na-amalite site n'ịjụ ihe ndị ọrụ GIS na-achọ n'ezie, ana m eche na ókè a ga-enwe nkwubi okwu a extrapolate gaa na mba anyị sitere na ya nke eziokwu ya nwere ike ịdị ma ọ bụ dị iche (ikekwe ọ dị ezigbo iche) na nke gị.
Ihe 'ihe onwunwe' eji mee ihe maka ọmụmụ ihe ahụ bụ ọrụ niile na GIS bipụtara na mgbasa ozi ọha na eze dị iche iche. Onyinye ndị a na - ejide 'ndị isi nchụso' anaghị etinye aka n'ihi mgbasa ozi nke ha.
A na-eji okwu iji dee ọchụchọ n'ịchọ ọrụ na atọ n'ime ebe nrụọrụ weebụ kachasị ewu ewu na New Zealand. "GIS, Geography, Location, Space, Geography" bụ okwu e ji mee ihe maka nzube a.
Ozugbo e debara ọkwa ndị ahụ, achọtara data nchịkọta, wepụ mbipụta abụọ na 'positives ụgha'. N'ikpeazụ, a rịọrọ ihe ndị a rịọrọ maka ọnọdụ a chọrọ site na ọkwa ọ bụla. Àgwà ndị e mepụtara ma chekwaa bụ:
Aha nke ọrụ nyere
Mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ndị na-achọ ọrụ mere
Isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na-achọ ọrụ
GIS dị ka isi ma ọ bụ nke abụọ dị mkpa maka ọrụ a chọrọ
Nkà na ụzụ a chọrọ na ngwanrọ software
Ebe nke ọnọdụ na,
Anyị chere na ọ dị oké mkpa ịkwụsị ebe a ma mee ka ụfọdụ nsogbu pụta ìhè tupu igosi ihe nchoputa nke omumu a. Ka anyị lee:
The 'GIS ụlọ ọrụ' na denomination na echiche mgbagwoju anya
"Otu n'ime ihe mere m ji mee nchọpụta a bụ n'ihi na achọrọ m ịnweta usoro mgbali chọpụta usoro nke ụlọ ọrụ GIS na New Zealand. "ka Nathan Heazlewood na-ede, bụ onye edemede nke mbipụta ihe anyị tụlere Na mgbe anyị na isiokwu "Ọtụtụ ohere"Anyị na-agbalị ịkọwa echiche, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na okwu ahụ ugbu a Ọ ka na-eme ọtụtụ obi abụọ.
Buru n'uche na isiokwu abụọ m ga-ewere dịka akwụkwọ si n'aka otu onye edemede na afọ a, 2017. Mgbe ahụ, m ga - atụle, site na ikikere gị, ụdị ntinye "mkpụrụ obi" maka nyocha ahụ n'ihi na, dị ka ị ga - esi na - agụpụta, todo ọ na-emekọ ọnụ.
"Ọrụ ụlọ ọrụ GIS nwere ike ịgbagwoju anya. Ọ dị mgbagwoju anya "bụ okwu nke Heazlewood na-amalite na post"Nnukwu ebo nke ụlọ ọrụ GIS”. Ọ gara n'ihu, "Ọgba aghara adịghị mma." Ihe mbụ. Ànyị nwere nghọta doro anya? Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, nke nwere ike, olee otu anyị ga - esi achọta okwu nke anyị ga - akpọ ebe ọrụ a n'ezie kwe ka anyị niile ghọta ihe anyi bu n'uche?
Ezigbo Nathan na - akọwa usoro anyị na - ejikarị eme ihe: 'GIS Industry', 'Space', 'Geomatics', 'Geospatial', 'Science Science', 'Alaka Nlekọta nke Geography' ma n'ikpeazụ 'okwu ọzọ' ( Akara ndụ!). Nke n'ime ha adabara mma?
Nke a abụghị obere mkparịta ụka dịka i nwere ike iche. N'ihi 'ọgba aghara' mbụ a, a ga-enwe obi abụọ dị ukwuu nke na-emetụta ụdị ọrụ atọ a na-arụ: aha 'ọrụ a chọrọ, ruo n'ókè GIS bụ isi ma ọ bụ ihe dị mkpa na-arụ ọrụ na, olee ihe bụ isi ụlọ ọrụ ahụ? onye choro Ka anyị gaa n'ihu
Ụdị amara nke utu aha
O zuru ezu iji weghara obere akụkụ nke utu aha dị iche iche a na-akpọ "ndị ọkachamara nke mpaghara ahụ" na nnyocha nke Heazlewood iji ghọta otú e si akpagbu ụdị 'okpuru aha na okpukpe' bụ:
N’eji otu nzọ ụkwụ pụọ na mmiri iri, na-eji obi ụtọ, anyị na-echeta akụkọ “Nnukwu ebo….” Na nke a, Heazlewood na-emegharị akụkọ banyere ọrụ bara uru nke ukwuu, nke anyị, na echiche anyị, na-enyere aka ịkọwapụta panorama a dị mma.Ihe nke abuo. Chọpụta, na kaadị azụmahịa aghaghị gosiputa ezi ahia onwe onye,, n'inwe obi uto igosi onwe anyi n 'uwa n'uzo kachasi nma, ha na-amalite igbalite esemokwu kachasị iche: onye' gụsịrị akwụkwọ ', onye' obere 'nakwa nke' agadi '. Mmadụ nwere ike ịkọwara anyị n'ụzọ doro anya na ókè na njedebe nke onye ọ bụla nke utu aha e gosiri? Ị ma?chefuo'ọrụ n'etiti ụfọdụ n'ime ha? Ezi ajụjụ! M na-atụ aro nyochaa okpukpu zuru ezu nke onye dere edere yana okpokoro edozi nke o kere site na obughi nani na nchoputa a, kamakwa, karia ihe nile, n'oru ya di oke na mpaghara.
"Ihe m nwere ike ikwubi bụ na n'ime ụlọ ọrụ GIS, e nwere" agbụrụ "anọ dị iche iche:
(1) Ndị '… Gists'
(2) The '… Ndị na-ese ihe'
(3) 'The Measurers'
(4) '' Techies '”
Site na ihe ngosi ọ na-agba mbọ inyere anyị aka ịghọta echiche gị:
Lelee ugbu a na 'nkọwa nkọwa' gị:
"(1) Ndị '… Gist' bụ n'ụzọ ụfọdụ ndị isi nyocha na ndị ọrụ nke data GIS na-elekwasị anya na nyocha sayensị (ya mere, ọtụtụ aha ọrụ ha na-ejedebe na '… GIST'). Ọ tinyekwara (ma ọ bụ nwee ike ịgụnye) ụdị nyocha ndị ọzọ.
(2) Ndị '... Ndị na-ese ihe' bụ ndị na-elekwasị anya na ngosipụta ma ọ bụ nnọchite nke data mpaghara, dịka ndị na-ese ihe na 'ndị ikwu' ha.
(3) 'Measurers' bụ ndị ahụ na-anakọta data mpaghara site na iji nha na ngwaọrụ ihe onyonyo.
(4) Ndị 'Techies' ndị ahụ na-eme dị ka ụdị nnabata n'etiti ụlọ ọrụ GIS na teknụzụ. N'ebe a, ọ na-ezo aka na ndị mmepe GIS na ndị ọrụ ibe ha. "
Mgbe nkọwa a mara mma (nghọta anyị), ọhụụ anyị n'ozuzu doro anya, ọ bụghị ya? Ka anyi laghachi na nyocha anyi.
Isi nke atọ. Ihe ndị na-adọrọ mmasị maka nyocha
En ebe mbụ, N'ụzọ dị aṅaa, site na ọkwa dị mfe, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ma ọ bụrụ GIS bụ ma ọ bụ abụghị ọrụ kachasị ọrụ nke ụlọ ọrụ na-achọ ọrụ?
Nke a adịghị ka ọ dị mfe nghọta a priorina-akọwa Heazlewood, na mgbe ahụ nkọwa:
E nwere òtù dị iche iche na ọ bụ ezie na ha na-egosipụta onwe ha n'ihu ọha site n'inweta azụmahịa na-elekwasị anya n'otu mpaghara, ha na-enye ọrụ karịa otu ụlọ ọrụ. Nke a bụ ihe gbasara ụlọ ọrụ nhazi ụlọ ọrụ nke nwere ike inye ọrụ na ụlọ ọrụ ndị metụtara akụkụ nkwurịta okwu, ọrụ na iwu.
E nwere òtù nwere ike 'dabara' n'ụdị dịgasị iche, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe gbasara Ministry of Transport nke a pụrụ ịkọwa n'okpuru isiokwu nke Central Government, ma nke ahụ nwekwara ike ịmepụta nke ọma n'ime ụlọ ọrụ njem.
N'okwu abụọ ahụ ọ bụ nyocha nke onye nyocha ahụ, dabere na ahụmahụ gị, nke ga-eme mkpebi ndị ọ chere na ọ dị mma.
En ebe nke abụọ na ịṅa ntị nke ọma, ihe ma ọ bụ ihe ọrụ nkà na ụzụ a chọrọ na ngwanrọ software a kpọtụrụ aha na GIS ọrụ ọrụ? N'ebe a, onye edemede ahụ gbasaa ntakịrị:
A zere ya ilebara 'ezinụlọ nke ngwaahịa' anya na ọ bụ ihe ùgwù nke ngwaahịa ndị a nke ezinụlọ a chọrọ, dịka ọmụmaatụ AutoCAD kama ịbụ nanị CAD.
N'aka nke ọzọ, a na-etinye 'ngwá ọrụ ndị metụtara' na nyocha ahụ, dịka SQL ma ọ bụ HTML. Nke a nwere ọtụtụ mgbagha. Ọ na-enyere anyị aka ịmatakwu ihe ndị ahịa na-achọ n'aka anyị.
A ghọtara na ụfọdụ ọkwa akọwapụtara karịa otu ụdị software. Ma eleghị anya, ọchịchọ iji nyocha ma wepụta mmasị ndị mmadụ. N'ebe a, anyị na-ewere ihe atụ nke onye edemede dere, mana aghaghị ịmara na ọnọdụ ha. Otu ụdị ihe ọmụma, ebe anyị na-aga:
“Anyị bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ… (ekwu okwu, ikwu okwu, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na-abịa ugbu a) a) Anyị na-atụ anya nghọta dị mkpa maka html5, css3 na ahụmahụ asụsụ nkesa, b) Ịghọta ihe ndị na-esonụ dị mkpa: cors, cdn, xss, na-anabata nkụnye eji isi mee, ddd, cqrs, tdd, nkwụsị, mmegharị ihe omume, ime ụlọ, microservices, ncha, mvc, mvvm, IoC, SOLID, DRY y YAGNI"Anyị guzoro, guzoro, anyị gara n'ihu:" Anyị na-eji coffeescript, svg, d3, crossfilter, velocityjs, mpempe akwụkwọ, momentjs, bootstrap, obere, nodejs, eloda, redis RabbitMQ, expressjs, handlebars, oauth2, passportjs na docker... " Ugbu a na njedebe (ka mma ha gaara amalite ebe a) "c) Ụfọdụ ihe omuma nke nhazi ihuenyo weebụ y GIS teknụzụ".
Rịba ama na ọ na - ekwu "ụfọdụ ihe ọmụma na GIS"Ọ bụ na ha achọghị ndị ọkachamara? O yiri ka 'ọkachamara'Ọ tinyeghị GIS nke ukwuu ... Anyị na-ahapụ ya ebe ahụ wee gaa n'ihu.
31% nke mgbasa ozi achọghị software ọ bụla akọwapụtara (ha kwuru naanị ihe dị ka "ha ga-enwerịrị ike na GIS") Nke a yiri ka ọ bụ akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ọgụgụ. Ihe niile a na-egosi na ọ bụrụ na ị maara GIS, ị maara ha niile, maọbụ ọ bụrụ na ndị were ọrụ anaghị ama nkà ha chọrọ kpọmkwem. " Ajụjụ na-adọrọ mmasị, ọ dị mma? Esi mara?
Ihe ngosi nke na-egosi teknụzụ teknụzụ haziri dị ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke oge a na-akpọ na nke ọ bụla nke mgbasa ozi 140 nke ihe atụ na-esonyere nyocha a:
Sitekwa na ya dị mkpa, anyị na-ekwe ka anyị gosipụta na tebụl, iri (10) aha ndị kachasị elu:
Ngwaọrụ Ee e
En nke atọ, ụgwọ. Cheta na e mere nnyocha maka New Zealand. Ego ya, dollar New Zealand (NZD), nwere otu ihe 1 NZD = 0.72 USD (Dollar America). Ekwesịrị ịgbakwunye na, ebe ọ bụ na ha bụ eziokwu dị iche iche na mba ọ bụla, anyị nwere ike iwere ya dịka data ntụgharị aka. N'ime igbe egosiri, 'k' na-egosipụta 'puku kwuru puku':
Isi nke anọ. Eziokwu banyere akụkọ ifo. Ịdọ aka ná ntị ị ga-eburu n'uche
O doro anya na nchọpụta niile e mere n'ihu ọha nakwa (ma eleghị anya na nke kachasị mkpa) nkwubi nke a ga-enweta site na nke a aghaghị igosi ihe omimi sayensi ma gosipụta ya eziokwu. Heazlewood na-egosipụta egwu ya banyere ya ma dọọ aka ná ntị:
Na-eche nche mgbe ị ghọtara 'echiche' na 'ihe dị iche iche'. Anyị ga-enwerịrị ike ịmata ndị 'ọkachamara' ndị amụma ha anaghị adabere ihe àmà dị njọ kama nke ahụ, ha na-agbakwasị ụkwụ na mgbasa ozi ha na-anọchite anya ya.
Kpachara anya maka 'nyocha ntuli aka'. Nyocha ndị ahụ e mere na 'afọ ofufo' adịghị enweta kpọmkwem ihe nnọchiteanya nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ, nke nwere ike iduga nkwubi okwu ọjọọ.
Mechie echiche a site na ịchọrọ na ọmụmụ ihe nile nke ụdị a kwesịrị ịhapụ 'data data' n'efu (dị ka ọ na-eme) n'ihi na ndị ọzọ nwere ike ịme nyocha ndị ahụ na nyochaa na ọ ga-ekwe omume iru otu nkwubi okwu ahụ.
Ndị na-ege ntị na ọmụmụ ihe ahụ na ndụmọdụ ndị ahụ
Onye edemede ahụ na-egosi ịbụ onye nkuzi na / ma ọ bụ onye nkụzi nke ndị gụsịrị akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ GIS. Ha kwuru na "ha nwere obere ihe ọmụma banyere ụlọ ọrụ ha na-achọ ịbanye, na-eleghara ọrụ ndị dịnụ anya dịka yana ọmụmụ / ọmụmụ ha kwesịrị ịgbaso iji meziwanye ohere ha nwere inweta ọrụ." Ihe a nile bụ ihe ọzọ mere ị ga-eji mepụta nchọpụta anyị na-ekwu.
Ihe omuma a nke ndi na-eto eto kwuru bu ihe di n'ime ihe obula. N'ihi nke a, anyị na-akọwa ma kwenye na onye edemede ahụ mkpa ọ dị iji ọrụ data nwere ntụkwasị obi dị mkpa nke na-enye ohere ịnweta na ebumnuche na nkwubi eziokwu.
Na dika onye o bula bu onye nduzi na-eche banyere ikwado ndi gụsịrị akwukwo na umu akwukwo ka ha gua oru ha i kwesịghi ichegbubiga onwe gi ókè banyere ịmara ma tinye ya n'ọrụ niile ngwaọrụ ndị akpọrọ na ọkwa ọrụ depụtaghachiri ma depụta n'elu, nke mepụtara ihe karịrị otu mkpagide n'ọtụtụ. Mgbe ahụ tinye nke a na anyị anaghị ala azụ ịkekọrịta ma degharịa okwu: "Ọ B IFR YOU na DON B DONGH SK IJI NKE AH ALL AHAM, AD ,GH, IWU." Iji gbakwunye na okwu njakịrị: "Naanị m anụ ụfọdụ n'ime okwu ndị ahụ n'ebe ọrụ m." Nke ise ka a na-echeta ya.
Mkpebi nke ọmụmụ ihe ahụ
Anyị bịarutere! Anyị na-akọwa ebe a naanị ndị na-ekwe ka anyị kwuo okwu n'ozuzu:
Un 53% nke akwukwọ ndị a bipụtara na-ewere GIS dị ka ihe kwekọrọ n'ihe ndị achọrọ maka ọnọdụ ahụ, ebe a 47% na-elekwasị anya na GIS dị ka ihe bụ isi nke ngwa gị.
Ụlọ ọrụ gọọmenti etiti na-enye okpukpu atọ karịa ụlọ ọrụ gọọmenti etiti.
15% nke ọrụ na GIS metụtara ọrụ, lọjistike ma ọ bụ nnyefe.
Kwa ụbọchị ebipụta akwụkwọ ọkwa nke ọrụ na GIS na New Zealand.
Anyị doro anya na eziokwu nke mba ọ bụla dị iche. Otú ọ dị, anyị apụghị ịkwụsị ịtụgharị uche banyere gburugburu ebe obibi anyị:
Ego ole ka GIS chọrọ dị ka ihe dị mkpa na atụmatụ ọrụ?
Dabere na mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị-mpaghara nke mpaghara gị, olee mpaghara nke ọha - gọọmentị ma ọ bụ nkeonwe bụ atụmatụ ọrụ kachasị ukwuu ewepụtara na GIS?
Kedu akụkụ nke ụlọ ọrụ ndị ọkachamara kachasị chọrọ na GIS?
Ugboro ole ka onyinye ọrụ na-apụta na GIS na mgbasa ozi dị iche iche?
Ajụjụ ndị nwere azịza anyị kwesịrị ịgbalịsi ike inweta. Mgbe ahụ, anyị gwụchara isiokwu a na ajụjụ anyị na-atụ anya ga-abụ otu n'ime isi ihe nke ntụgharị onwe onye:
Ị maara nke ọma ihe bụ ọrụ GIS na ihe ndị o nwere ike ime na kọntinent ma ọ bụ ala nke ị bụ?
Previous Post«Previous Onwere - Template iji gbanwee nhazi UTM na Geographic
Next Post Ndụ - Ajọ Ifufe Irma - A na-ejikarị Society emekọrịta ihe na geospatialNext »
Otu Nzaghachi “GIS na-agba mbọ were were were were. Akụkọ ifo na eziokwu "
Miguel A. Martinez Yordan kwuru, sị:
Edemede mara mma. Nnyocha dị mma na nyocha nke nsonaazụ m kwenyesiri ike n'ihe ekwuru ebe a. Anọwo m na-akatọ aha ọkwa ndị a chọrọ na Internetntanetị ebe ọ bụ na ha wetara ọgba aghara karịa ịkọwapụta. Etufu nyocha nke Spatial Analysis furu ma dochie anya onye nrụpụta «Onye na-eme ihe» ma ọ bụ «Onye Mmemme. Ebumnuche ya ịkwụ ụgwọ maka ịmara GIS mana ebum n’obi ya ka anyị bụrụ ndị ọkachamara na mmemme na njikwa netwọkụ. Echere m na oge eruola ka ịnwere GIS nwee ikike na nhazi n'okpuru ngalaba nke Geography zuru ụwa ọnụ.